ကြားဖူးပေမယ့် စျေးကွက်မှာ သိပ်မတွင်ကျယ်တဲ့ ampoule လေးတွေအကြောင်း | CosmeticMyanmar
Home » Article » ကြားဖူးပေမယ့် စျေးကွက်မှာ သိပ်မတွင်ကျယ်တဲ့ ampoule လေးတွေအကြောင်း
ကြားဖူးပေမယ့် စျေးကွက်မှာ သိပ်မတွင်ကျယ်တဲ့ ampoule လေးတွေအကြောင်း
Serum တို့ essence တို့ကြားလိုက်တာနဲ့ အလှအပကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အချစ်တို့ကတော့ တန်းပြီးသိမှာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် အလှအပအကြောင်းကိုလည်း စိတ်မဝင်စား မသိတဲ့သူကတော့ ဘာမှန်းတောင်သိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ Serum, essence တို့ဆိုတာတွေက မိန်းကလေးတွေရဲ့ခုနောက်ပိုင်းskincare တွေမှာ တော်တော်နေရာယူလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ အဆင့်ဆင့်လိမ်းရတဲ့ skincare တွေကိုတော့မပြောပြတော့ပါဘူးနော်။ မမှတ်နိုင်မှာစိုးလို့ ဟိဟိ။ အဲ့ထဲကမှ အလှအပကို ကျွမ်းဝင်တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူလေးတွေတောင် သိပ်ပြီးမကြားဖူးတဲ့ ပစ္စည်းလေးတစ်ခုအကြောင်းကို ပြောပြမယ်။ တစ်ချို့လည်း ကြားဖူးတယ် သုံးဖူးတယ် ဒါပေမယ့် သူများတွေသုံးလို့သာလိုက်သုံးတာ ဘာလို့သုံးရတာလဲဆိုတာမသိတဲ့သူလေးတွေလည်းရှိမယ်ထင်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော်။
လိုရင်းတိုရှင်းပြောရရင်တော့ ampoule ဆိုတာက serum ,essence တို့နဲ့ တစ်အုပ်စုတည်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ သူကတော့ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ အသားရေကိုအထိရောက်ဆုံးပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ serum တစ်မျိုးပါ။ Booster လိုမျိုးသဘောမျိုးပါပဲ။ အသားရေကိုလျင်မြန်စွာအားဖြည့်ပေးတာပါ။ Serum တွေ essence တွေ မလိမ်းခင် သူ့ကိုလိမ်းပေးရမှာပါ။ Ampoule လေးတွေကတော့ ဖန်ပုလင်းတွေထဲမှာ droppers လေးတွေနဲ့လာပါတယ်။
? မျက်နှာအတွက်လုံလောက်မယ့်ပမာဏကိုလက်ဖဝါးထဲထည့်ပါ( နှစ်စက်သုံးစက်လောက်ဆိုလုံလောက်ပါတယ်နော်)
? လက်ဖဝါးကိုပွတ်ပြီးတော့ မျက်နှာပေါ်ကိုသေချာလေးလိမ်းပေးလိုက်ပါ။
? ပြီးရင်တော့ အသားလေးကို ပုတ်ပုတ်ပြီးလိမ်းပေးပါ။ အသားထဲစိမ့်ဝင်သွားအောင်လုပ်ပေးသလိုမျိုးပါ။
စျေးကွက်ထဲမှာတော့ အမှတ်တံဆိပ်မျိုးစုံနဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရမှာပါ။ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ တံဆိပ်ကို ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှ ဝယ်ယူပါ။
မိန်းကလေးတွေကလည်းဘယ်လိုတွေပဲ အသစ်တွေထွက်ထွက် ဝယ်ကြ စမ်းလိမ်းကြနဲ့ အားပေးကြမ်းကြတဲ့သူတွေချည်းပါပဲလေ။ အဲ့တော့ဝယ်တဲ့သူတွေကတောင်ဝယ်နေတာ ထုတ်တဲ့သူတွေရောင်းတဲ့သူတွေကတော့ပျော်တာပေါ့။ ပြောချင်တာကတော့ အသစ်တွေထွက်တိုင်းလိုက်သုံးနေတာထက် ကိုယ့်အသားရေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးတွေကို သုံးတာက ပိုက်ဆံအပိုကုန်တာလည်းလျော့သလို အသားရေအတွက်လည်းထိရောက်ပါတယ်။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ တော်တော်လည်းသိသွားလောက်ပြီထင်ပါတယ်နော်။ အသုံးဝင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်နော်။
Halloween အမှီ ထပ်ထုတ်လိုက်ပြန်တဲ့ Kylie Cosmetics ရဲ့ Halloween Collection အကြမ်းကြီး